14/05/2018 admintriatra Tresaka 0
Tsy nahomby ilay fanonganam-panjakana nokotrehan’ny TIM sy ny MAPAR, noporofoin’ny vahoaka fa leo korontana sy “coup d’état” tsy nitondra inona ho an’ny firenena sy ny fiainam-bahoaka izy ireo, hany ka vola very fotsiny ihany ny nanakaramana olona ho eny amin’ny lapan’ny tanàna.
Nibaribary nandritra izay fe-potoana nitanian’izy ireo masoandro teny amin’ny 13 Mey izay koa fa tsy manana hevitra sy foto-kevitra mihitsy ireo mpitarika, toa an-dry Rossy sy Roberto Tinoka, io ilay antsoin’ny vazaha hoe “apprentis sorciers”. Samy hafa mihitsy tamin’ny andron’ireny pastora Andriamanjato, Germain Rakotonirainy ireny, mba nisy lohahevitra na dia samy fanonganam-panjakana izao aza. Ny an’ireto MAPAR sy TIM ireto toa tsy misy afa-tsy fandrahonana sy fampihorohoroana!
Teo anatrehan’izany tsy fahombiazana izany anefa dia voatery naverina niditra an-tsehatra indray ilay dinôzôro, tompondakan’ny fanonganam-panjakana nanomboka ny taona 1995. Tsy iza izany fa i Norbert Lala Ratsirahonana. Efa lany henatra mihitsy angamba ity mpanao politika iray ity, izay nampiditra ny firenena tanaty anaty kizo hatrany. Izy mantsy no misolo tena an’i Andry Rajoelina amin’izao fifampidinihana amin’ireo mpanelanelana avy any ivelany izao. Izy no nanongana an’i Zafy Albert, nanongana an’i Didier Ratsiraka, nanongana sy nampamoaka ireny NOTAM ireny ho an’i Marc Ravalomanana. Nataony nahalala ny anarany mihitsy ny TIM nandritra ny Tetezamita ary anisan’ireo niantefan’ny hatezeran’ireo “diaspora” isaka ny mivahiny any Frantsa.
Itony Norbert Lala Ratsirahonana itony no antsoina hoe tsy mena-mivadika satria mbola mpanolotsainan’ny filoha Hery Rajaonarimampianina izy izao misolo tena an’i Andry Rajoelina izao. Vao nandre ny anarany ny olona dia nihoraka daholo “mamaaa… io ndray le rangah!”. Ny antony? Henatra ho an’Antananarivo ny olona tahaka azy, ary tsy mahagaga mihitsy raha mivoaka ny fitenenana manao hoe: “ianareo ao Antananarivo ao foana ve no handidy sy hanapaka eto amin’ity Madagasikara ity? Hitsakitsahanareo tsotra izao fotsiny ve ny safidinay?”.